🥇 ▷ IPad 11 Pro wuxuu lahaan lahaa codsi wanaagsan oo ku saabsan boos celinta ✅
Jimcihii la soo dhaafay Apple waxay awood u siisay boos celinta barnaamijyada cusub ee la soo bandhigay ee iPhone 11 iyo 11 Pro oo leh hawo shaki la’aan oo ku saabsan inay iibin doonaan iyo in kale maalmaha ugu horreeya. Hadda Ming-Chi Kuo, oo ka mid ah falanqeeyayaasha caanka ah ee caanka ah ayaa daabacay warbixin cusub halka ay waxay sheegaysaa in baahida loo qabo qalabkan cusub ay dhaaftay wixii la filley Ka dib markii la furo kaydinta.
Warbixintani waxay bixisaa faahfaahin aad u xiiso badan sida khadka cusub ee midabka ayaa ah midka ku guuleysta inta ugu badan kaydka. IPhone 11 Pro, midabka cusub ee cagaaran waa kan ugu badan ee la codsado halka kujirta iPhone 11 gaaga iyo cagaarka ay yihiin kuwa aad loo dalbado. Shaki iigama jiro inay dadku jiidayaan midabyadan cusub ee aadka u quruxda badan isla markaana isbedel ku sameeya jiilkii hore. Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo laxiriira ikhtiyaarka xulashada midab joogto ah sida caddaan ama dahab ah iPhone 11 Pro oo aan badali laheyn aaladda.
Baahida loo qabo barnaamijka iPhone 11 Pro ma aha niyad jab
Laakiin maahan war wanaagsan oo dhan, maadaama Apple It will haysata dhibaatooyin kaladuwan xagga soosaarka iPhone 11 Pro cagaarka sababtoo ah dhalada wax uun baa ku dambayn doona xaddidaadda iibinta qalabkan oo dib u dhigta taariikhaha keenista la qorsheeyay.
Isla hadda Spain haddii aan rabno inaan iibsano mid ka mid ah iPhone-kaan cusub ee Apple Store Online waxaan aragnay dhibaatada taas laguma qaadi karo hal dukaan oo jirka Apple ah, taariikhaha gaarsiinta ayaa bilaabey inay sii fidaan Ilaa dhowr toddobaad. Tusaale ahaan, haddii aan rabno inaan iibsano iPhone 11 Pro 64GB cagaaran ma heli doonno gurigeenna illaa ugu yaraan Oktoobar 1, halka haddii aan ballansanno iPhone 11 waxaan ku haysan lahayn gurigeenna Sebtember 20.
Ming-Chi Kuo wuxuu xusayaa in iPhone 11 Pro ay qaalisan yihiin si fiican ayey wax ugu iibinayaan Mareykanka, halka iPhone 11 uu China ku leeyahay guul badan sida xaqiiqada ah qiimaheeda ugu tartan badan suuqa. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijyada is-dhaafsiga dulsaarka ah iyo barnaamijyada maalgelinta ayaa sidoo kale gacan ka geysan lahaa kor u qaadista iibiyadan iyaga oo noo suuragelinaya innaga oo Apple kala kulano rubuc dhaqaale oo aad u wanaagsan.
Waxaan aad ula yaabanahay in taariikha cusub ee iPhone 11 aan dib loo dhigin in kasta oo ay dhici karto maxaa yeelay waxaa jira alaabo badan oo la heli karo oo aan ka fikirno, maadaama qalabkaan oo ah € 809 uu noqonayo xulasho iibsasho weyn hadda haddii aad raadineyso wanaag. koox ahaan qiimo fiican mana dooneyno inaan ku bixino wax kabadan kun euro lacagta qalabka.
Naga tag sanduuqa faallada haddii aad horey ugu ballansatay iPhone 11 ama 11 Pro dukaanka Apple Store